David Luiz oo doonaya inuu noqdo Kabtanka kooxda Chelsea. - Caasimada Online
Home Warar David Luiz oo doonaya inuu noqdo Kabtanka kooxda Chelsea.
David Luiz oo doonaya inuu noqdo Kabtanka kooxda Chelsea.
David Luiz ayaa doonaya inuu kooxda Chelsea ku hugaamiyo Koobka Kooxaha Aduunka, wuxuuna ku taamayaa inuu mar uun noqdo Kabtanka kooxda Blues.
Luiz ayaa sidoo kale aaminsan in ciilkii kooxdiisu kasoo qaaday Champions League dartiis ay u qaadi doonaan FIFA Club World Cup, tiiyoo ay Horyaalka Premier League Toban dhibcood ka dambeeyaan hugaamiyeyaasha United.
“Markii ay kusoo mareen waqtiyo xun adigoo ah koox weyn, waxaad u baahan tahay inaad xoog yeelato,” ayuu yiri.
“Waan ogahay shaqsiyadeyda inaan noqon doono hugaamiye caadi ah: Kabtan ayaan ka ahaa Banfica anigoo 21 jir ah, waxaan kabtan ka noqday xulkeyga Brazil, marka waan garanayaa, Hugaamiyeyaasha kooxda sanado badan ayey halkaan joogeen, Waxaan u baahanahay inaan masuuliyad qaado aana isku dayo inaan caawiyo jiilka da’yarka ah ee kooxda. Ciyaartoyda sida Eden Hazard, waxay leeyihiin tayo la yaab leh, laakiin waa qof u baahan taageero. Hada dhow ayuu yimid Premier League, sida Oscar iyo ciyaartooy kale oo dhowr ah, ama Ramires, oo inta badan xishooda. Waxaan u baahanahay inaan caawiyo iyaga.
“Horaan waxaan dhihi jiray garbaheydu waa sida shimbirta marka waan qaadi karaa masuuliyad dheeraad ah. Waana jeclahay. Waan doonayaa. Waxaan door bidayaa inaan caawiyo asxaabteyda kale.”